haynta ujeedka asalka ah iyo raadinta horumar badan
Mudane Meng Lingwen had iyo jeer waxaa la weydiiyaa "Sidee shirkadu adigu u aasaastay oo aad u gashay suuqa caalamiga ah maadama aad tahay hiwaayad cilmiga bayoolajiyada" .Wuxuu yiri wax yar kadib "Samee wanaaga, ha waydiin mustaqbalka". Wuxuu noo sharaxay, isagoo cuskanaya ...
Toban sano oo safar ah meeshii ugu sarreysay adduunka 2011, Gaoididia PRISES Biotechnology Co., Ltd. ayaa la aasaasay; 2015, wax soo saarka shirkadda: Cinjirka galmada, Uurka iyo ugxanta xirmada tijaabada ayaa si guul leh u gudubtay shahaadada CE ee 2018, Shirkadda waxay ka soo qaybgashay Bandhigga Caalamiga ah ee Koonfur Afrika ...
Intii lagu guda jiray Sebtembar iyo Oktoobar, waaxda tikniyoolajiyadda ee loo yaqaan 'VP of Technology' ayaa hoggaamisay kooxda R&D si ay u fuliyaan xirmada baaritaanka antigen ee baaritaanka 'Corona virus'.
Intii lagu guda jiray Sebtembar iyo Oktoobar, waaxda tikniyoolajiyadda ee loo yaqaan 'VP of Technology' ayaa hoggaamisay kooxda R&D si ay u fuliyaan xirmada baaritaanka antigen ee baaritaanka 'Corona virus'. Waxay ku guuleysatay in la horumariyo oo loo dhigo khadka wax soo saarka. Bishii Oktoobar 26, Guddiga Wadashaqeynta Iskaashiga Caalamiga ee Wadada 'Silk Road' (SRIC) ayaa qabtay fiidiyowga labaad ...
Xafiiska Siyaasadda ee Golaha Dhexe ee CPC wuxuu qabtay kulan looga hadlayo ka hortagga iyo xakameynta COVID-19.
2020, Febraayo 20, Xafiiska Siyaasadda ee Golaha Dhexe ee CPC wuxuu qabtay kulan looga hadlayo ka hortagga iyo xakamaynta COVID-19. Maalintii labaad, hoggaamiyeyaasha dowladda hoose waxay booqdeen warshad, iyagoo fahansan xaaladda dhiirrigelinta dib u bilaabidda shaqada iyo wax soo saarka. Iyada oo laga jawaabayo baahiyaha ...